UngaZingisa njani kwiiNtengiso Ngaphandle koCima iiNkokeli zakho | Martech Zone
Ixesha liyinto yonke kwishishini. Ingangumahluko phakathi komthengi omtsha onokubakho kunye nokuxhonywa.
Akulindelekanga ukuba ufikelele kwintengiso kwiinzame zakho zokuqala zokufowuna. Isenokuthatha iinzame ezimbalwa njengoko uphando oluthile luyicebisa ingathatha iifowuni ezininzi njenge-18 ngaphambi kokuba ufikelele kukhokelo kwifowuni okokuqala ngqa. Ewe, oku kuxhomekeke kwizinto ezininzi eziguquguqukayo kunye neemeko, kodwa ngumzekelo omnye wokuba kutheni kunokuba nzima kumashishini ukuba aqonde inkqubo yokuthengisa.
Kule posi, siza kugubungela yonke into oya kuyidinga ukuyazi malunga nokwenza umnxeba wokuthengisa kwiinkokeli, kwaye okona kubaluleke kakhulu, ukwenza iifowuni zentengiso ezikhokelela kuguqulo lwabaxumi abatsha. Nangona ishishini ngalinye liya kuba nesicwangciso esahluke kancinane sokufikelela kwithemba, ngokuqinisekileyo kukho iingcebiso kunye neendlela ezifanelekileyo ezinokukunceda wena kunye neshishini lakho endleleni ukwenza izigqibo ezingcono.
Phambi kokuba sigrumbe nzulu kuloo nto, makhe sijonge ngokukhawuleza imeko yokuthengisa, imdaka phantsi ngamanani.
Iinkcukacha-manani zoThengiso Ngokujonga nje
Ngoku ka HubSpot kwaye Spotio:
I-40% yazo zonke iingcali zentengiso zithi ukukhangela izinto zeyona nto inzima kakhulu emsebenzini wabo
Okwangoku, kuphela yi-3% yabo bonke abathengi abathemba abameli bokuthengisa
I-80% yokuthengisa ifuna ubuncinane Ntlanu iifowuni ezilandelwayo, ngelixa abaninzi be-44% yee-arhente zokuthengisa banikezela emva kokulandelelana okukodwa (iifowuni ezimbini zizonke)
Abathengi baxela ukuba kunokwenzeka ukuba bamkele umnxeba wokuthengisa ukuba wenziwa ngexesha ekwakuvunyelwene ngalo ngaphambili
Ingathatha kangangoko Iifowuni ze18 ukunxibelelana nomntu onokubakho
Ityala leefowuni zokuthengisa kwiinkokeli zinokubhidanisa. Nangona kunjalo, kuyanceda ukuqonda apho izinto zimi khona ukuze ukwazi ukuqhubela phambili ukuphumeza impumelelo kwishishini lakho. Kwaye ekuphenduleni umbuzo wokuba ulinde ixesha elingakanani phakathi kweefowuni, uya kuba nakho ukufumana ibhalansi ethambileyo yokuzingisa ngaphandle kokucaphukisa ithemba lakho lokuthengisa.
Kukwakho nedatha eninzi ekhoyo ngaphandle enokunceda ukukhokela isicwangciso sakho sokufikelela, kwakhona.
Ngoku, makhe sithethe ngokufikelela kwintengiso ngokwayo kunye nokwenza iminxeba yokuthengisa.
Ukwenza umnxeba wokuThengisa
Xa usenza umnxeba wokuqala wokuthengisa, uya kufuna ukulungela ngokupheleleyo nasiphi na isiphumo esinokuvela kumnxeba. Yiba kanye ulungele ukuba umnxeba uphendulwe ngumkhokeli wakho kwaye uhambise isandi sakho njengoko uza kushiya umyalezo kwaye uzame kwakhona kamva. Kwaye lo ngumbuzo wesigidi seedola-emva kwexesha elingakanani?
Lonke ukhokelo kunye nomthengi baya kwahluka, njengoko kuqhelekile ukuba njalo malunga nayo yonke enye into ebomini. Nangona kunjalo, xa usenza umnxeba wokuqala wokuthengisa, uya kufuna ukuqiniseka ukuba ukulungele ukuvula umnyango wobudlelwane obutsha kunye nomthengi omtsha onokubakho. Amaxesha amaninzi, abameli bokuthengisa bahamba ngokukhawuleza baye kuvala, nto leyo ebangela ukuba bavalwe ngokukhawuleza phambi kokuba umnxeba azi ukuba bayathengiswa.
Ukuba ukhokelo aluphenduli umnxeba wakho okokuqala, kuya kufuneka ushiye i-voicemail emnandi kodwa eneenkcukacha ukuba kukho ukhetho lokwenza njalo. Bameme ukuba bakutsalele umnxeba kwakhona ngeyona nombolo ilungileyo ukuze bafike kuwe okanye ubacebise ukuba ungakuvuyela ukunxibelelana ngexesha elibasebenzela kakuhle. Ngale ndlela, unika iinketho zakho zokukhokela ukuba ukhethe kuzo kunye nomoya wokulawula kwimeko. Abantu abaninzi baya kusitshintsha isigqibo sabo ngokunikwa ithuba lokufumana umnxeba emva komhla kunye nexesha elicwangcisiweyo.
Ukulandelisa Ngokunikezela Ngokulindelekileyo
Ngelixa uninzi lwabathengi belindele impendulo yokuqala kumbuzo ovela kwishishini ngaphakathi kwemizuzu eyi-10 okanye ngaphantsi, kwiimeko ezininzi, banika ukuguquguquka ngakumbi xa kuziwa kunxibelelwano oluqhubekayo kunye nonxibelelwano. Iingcali zophuhliso lweshishini zicebisa ukuba kufuneka uvumele iiyure 48 emva kokuba ubize umkhokheli ngaphambi kokuba ufikelele kwakhona kubo. Oku kuqinisekisa ukuba uvumele ixesha leshedyuli yabo exakekileyo ngaphandle kokucaphuka okanye ukuphelelwa lithemba. Ikwanika ixesha elikhokelayo lokujonga imveliso okanye inkonzo yakho nokuba yinto abayifunayo okanye abayidingayo.
Unokwazisa abanethemba lokuba banako fikelela kuwe kwaye banokukwenza oko ngokusebenzisa amajelo amaninzi. Oku kubavumela ukuba bakhethe ijelo abaziva bekhululekile kulo kwaye kusenokwandisa amathuba akho okufumana impendulo. Kwaye ngaphandle kokuba uqhagamshelwe ngokuthe ngqo okanye ucelwe ukuba ubuyise umnxeba ngokukhawuleza, musa ukufowunela ukhokelo olufanayo kabini ngemini enye. Ishiya nje incasa embi emlonyeni welothe kuba ihlala iphuma njengento etyhala kakhulu kwaye inqwenela.
Ibhalansi eyonwabileyo, kubonakala ngathi, iphakathi kweeyure ze-24 kunye ne-48 kwiifowuni zesibini kunye nezilandelayo zokulandelela. Umzekelo, ukuba sele umtsalele umnxeba kabini kule veki, unokufuna ukucinga ngokulinda kude kube yiveki ezayo ukuze ufumane olunye umzamo wokufowuna. Sisenzo esibuthathaka sokulinganisa apha, ewe, kwaye kuya kufuneka ubone ukuba yintoni esebenza ngcono kuwe nakwishishini lakho. Ngokuthatha uluhlu lwendlela oluhamba ngayo umnxeba wakho wokulandelela, unokufumana umbono ongcono weyona nto isebenza kakuhle kwiqela lakho.
Kakade ke, enye indlela yokuqinisekisa ukuba bonke Iifowuni zokufikelela kwiintengiso ziyenziwa (kwaye zifunyenwe) ngexesha elifanelekileyo kukuvumela omnye umntu aphathe umsebenzi wakho kunye neqela lakho. Ukuthengisa ngaphandle kukunika ithuba lokuba ube neqela lobuchwephesha kwicala lakho eliqonda konke okuza nokwenza iminxeba yokuthengisa elandelelweyo, umnxeba wenkxaso, kunye nokunye ukugcina ishishini lakho lisebenza. Ukuba uthatha isigqibo sokuba ungathanda ukushiya i-callbacks komnye umntu ngelixa ugxininise kubathengi bakho, oko kuya kuqinisekisa ukuba yonke ifowuni ibuyiselwa ngexesha elifanelekileyo kunye nesiphumo esihle kakhulu.
USmith.ai iiarhente zenza iminxeba egameni lakho, ukuphucula isantya-ukuya-inkokeli yakho kunye nabasebenzi abangomthwalo abafuna ukufikelela kubaxumi. Baza kufowunela abakhokheli be-intanethi abazalisa iifom zewebhu, banxibelelane nabaxhasi ukuze bahlaziywe ngeminikelo, baleqe iintlawulo kwii-invoyisi ezingahlawulwanga, nokunye. Baza kuthumela ii-imeyile zokulandela kunye neetekisi emva kwefowuni nganye ukuqinisekisa ukuba unxibelelwano lwenziwe.
Ukulandelela ngokukhawuleza xa USmith.ai Iiarhente zenyani zisebenza njengeqela lakho lokufikelela:
Funda ngakumbi malunga ne-Smith.ai
tags: aikukubhadla okungeyonyanihubspotukufikelelaumnxeba wentengisoamanani call yokuthengisaizibalo zeefowuni zokuthengisaukulandelela intengisoukufikelela kwintengisoSmith.aiindawoiifowuni virtualumncedisi ophumayo wenyaniumsizi welizwi